Ch 2 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 2 John
2:1 Ary amin'ny andro fahatelo, amin'ny fampakaram-bady natao tao Kana any Galilia, ary tao ny renin'i Jesosy teo.
2:2 Ary i Jesosy koa dia nasaina tao amin'ny fampakaram-bady, tamin'ny mpianany.
2:3 Ary raha ny divay dia mahomby, ny renin'i Jesosy nanao taminy hoe:, "Tsy manana divay izy."
2:4 Ary Jesosy nanao taminy hoe:: "Inona no soa tokony ho ahy sy ho anao, vehivavy? Ny ora mbola tsy tonga. "
2:5 Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, "Ataovy izay rehetra lazainy aminareo."
2:6 Ary amin'izany toerana, nisy siny vato enina rano, fa ny fombafomba fidiovana ny Jiosy, indroa na intelon'ny famarana isaky ny.
2:7 Hoy Jesosy taminy:, "Fenoy rano amin'ny rano siny." Dia nofenoiny ho any amin'ny ambony indrindra.
2:8 Ary hoy Jesosy taminy:, "Ary manovo avy aminy, ka ento ho ao amin'ny lehiben'ny mpikarakara ny andro firavoravoana. "Ary rehefa nisambotra azy izy.
2:9 Avy eo, Ary rehefa hitan'ny lohan'ny mpitandrin-draharaha efa nanandrana ny rano ho divay natao, satria tsy fantany izay avy any, ihany ny mpanompo izay nanovo ny rano no nahafantatra, ny lehiben'ny mpikarakara niantso ny mpampakatra,
2:10 ka hoy izy taminy:: "Araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara manome aloha, ary avy eo, rehefa lasa mamo, izy manome izay ratsy. Fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. "
2:11 Izany no fiandohan'ny famantarana fa vita i Jesosy tao Kana any Galilia, ary nasehony ny voninahiny, ary ny mpianany nino Azy.
2:12 Rehefa afaka izany,, he descended to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples, but they did not remain there for many days.
2:13 Ary ny Paska ny Jiosy efa akaiky, ary dia niakatra tany Jerosalema i Jesosy.
2:14 Ary nahita, nipetraka teo an-kianjan'ny tempoly, mpivarotra omby sy ondry sy voromailala, ary ny mpanakalo vola.
2:15 Ary rehefa nanao zavatra toy ny karavasy avy kely tady, dia nandroaka azy rehetra hiala teo an-kianjan'ny tempoly, anisan'izany ny ondry aman'osy sy ny omby. Ary nararany ny vola madinika varahina ny mpanakalo vola, ary dia nazerany ny latabatra.
2:16 Ary ho an 'ireo izay nivarotra ny voromailala, hoy izy:: "Ento mivoaka ireto zavatra avy eto, ary aza manao tranon'ny Raiko any an-trano ny varotra. "
2:17 Ary tena, Nampahatsiahivina ny mpianany fa voasoratra: "Mazoto ny amin'ny tranonao mandoro ahy."
2:18 Dia namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe:, "Inona no famantarana asehonao aminay, mba hanao ireo zavatra ireo?"
2:19 Jesosy namaly ka nanao taminy, "Ravao ity tempoly ity, ary amin'ny hateloana dia hatsangako indray izy. "
2:20 Dia hoy ny Jiosy nanao hoe:, "Ity tempoly dia naorina teo ambonin'ny amby efa-polo enin-taona, ary ianao dia hatsangako indray izy ao anatin'ny telo andro?"
2:21 Kanefa dia niresaka momba ny ny tenany no tempoly.
2:22 Noho izany, rehefa natsangana tamin'ny maty, Nampahatsiahivina ny mpianany fa efa nilaza izany, ary dia nino ny Soratra Masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy.
2:23 Ary raha mbola tany Jerosalema izy, nandritra ny Paska, amin'ny andro firavoravoana, maro no natoky ny anarany, nahita ny famantarana fa Izy no hanefa.
2:24 Fa Jesosy tsy natoky azy ireo, satria ny tenany nahalala ny olona rehetra,
2:25 ary satria tsy mba mila ny olona mba hanolotra fijoroana ho vavolombelona momba ny lehilahy. Fa ny tenany nahalala izay ao anatin'ny olona.